Madaxweyne Xasan Sheekh: Aad iyo aad ayaan ugu tiirsanaan karnaa ciidamada AMISOM – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
1st February 2016 Xuseen Axmed Af Soomaali 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in wali ay Dowlada Soomaaliya ku tiirsanaan karto ciidamada shisheeye ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.
Wareysi uu siiyey BBC qeybteeda Af-Soomaaliga, ayuu madaxweyne Xassan kaga hadlay waxqabadka ciidamada AMİSOM iyo cidda laga rabo in ay dhisto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Mar wax laga weydiiyey bal in Dowlada Federaalka Soomaaliya ay wali ku tiirsanaan karto ciidamada Midowga Africa ee dalka jooga ayuu ku jawaabay in ay si aad ah ugu tiirsanyihiin walibana ka wax qabad badanyihiin ciidamada Qaramada Midoobay ee howlgalada u jooga meelo ka mid ah aduunyada.
‘Cidamada AMİSOM aad iyo aad ayaan ugu tiirsanaan karnaa, Soomaalida wax badan ayey u qabteen waana gargaareen, maalinteey imaanayeen iyo maanta Soomaaliya way kala duwantahay, xaaladda Shabaabna way kala duwantahay’ ayuu yiri madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa laba u kala qaaday dagaalka ay Soomaaliya ku jirto, isaga oo ku tilmaamay kan hore mid ay aduunyada oo dhan si saf ah ula dagaaleyso argagixiso, halka dagaalka labaadna uu ku tilmaamay mid Soomaaliya oo kaashaneyso Amisom ay goob dagaal oo toos ah kula qaadaneyso Al Shabab.
Wuxuu intaasi ku daray in mar haddii macriko dagaal ama goob dagaal ay laba ciidan isaga hor imaadaan ay markaasi suura gal tahay in marba dhinac uu dagaalka ku jabo taasina ay qeyb ka tahay xaalad dagaal.
İsaga oo ka jawaabayey su,aal aheyd muddada dheer ee uu socdo howlgalka AMİSOM iyo qarashaka lagu bixinayo oo aad u badan ayuu Madaxweyne Xasan Sheekh aad u difaacay howlgalka AMİSOM.